Dr. Tint Swe's Writings: Doxycycline (ဒေါက်ဆီဆိုက်ကလင်း)
၁။ ဆရာရှင့် သမီးက ပထမနှစ်ကျောင်းသူပါ။ ဝက်ခြံပေါက်လို့ doxy သောက်တာ သက်သာတဲ့ရှင့်။ နေရောင်ထဲသွားလို့ ရလားရှင့်။ သမီးက ကျူရှင်သွားနေရလို့ပါ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မ အသက် ၄၂ နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၄ လလောက်က ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် အလှကုန်တစမျိုးအား အသုံးပြူ ပြီးနောက် မျက်နှာပေါ်တွင် အဆီဖုမေးရိုးတစ်ဝိုက်တွင် အဆိုးဆုံးထွက်လာတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောလာတာက Doxycycline ဆေးတောင့် ညအိပ်ခါနီးသောက်ပေးဘို့ပါ။ ဆေးရဲ့ အကျိုးအပြစ်များနဲ့ သောက်သုံးရန် သင့်မသင့် မေတ္တာရှေ့ထား၍ ဆရာအချိန်ရတဲ့အခါ ဖြေကြားပေးပါဆရာ။ ကျန်းမာပကတိ ချမ်းသာစွာ အမြဲရှိပါစေရှင့်။
Doxycycline (HCl) ဆိုတာ Achromycin, Vibramycin တွေလိုဘဲ Tetracycline (တက်ထွာဆိုက်လင်း) တမျိုး ပိုးများစွာကိုနိုင်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေး၊ဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီးယားတွေကို မျိုးမပွါးစေအောင် လုပ်ပေးတယ်။ ဆေးကုမ္ပဏီတွေက ပေးတဲ့နာမယ်တွေက Adoxa, Alodox, Avidoxy, Doryx, Monodox, Oracea, Oraxyl, Periostat, Vibramycin Calcium, Vibramycin Monohydrate, Vibramycin, Vibramycin Hyclate, Vibra-Tabs တွေဖြစ်တယ်။
ဝက်ခြံ၊ Blemishes, Bumps, Acne-like lesions ခေါ်တဲ့ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံလို အနီဖုလေးတွေ ဖြစ်တာတွေ အတွက်လဲ သုံးတယ်။ ဂနိုးရီးယား၊ (ကလာမိုင်ဒီးယား) ဆစ်ဖလစ်၊ (ရှန်ကာရွိုက်)၊ ကျားအစေ့ရောင်၊ လိင်ကတဆင့် ကူးစက် ရောဂါတွေ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ၊ သွားဖုံးရောင်၊ နူမိုးနီးယား၊ Hemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အသက်ရှူလမ်းရောဂါ၊ Lyme disease (လိုင်မ်း) ရောဂါ၊ အရေပြား အနာ၊ Anthrax ဒေါင့်သန်းရောဂါတွေအပြင် ဂနိုးရီးယား ကြောင့် မဟုတ်တဲ့ ဆီးပြွန်ရောင်၊ Rocky mountain spotted fever အဖျား ရောဂါတမျိုး၊ (တိုက်ဖတ်စ်) ရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ Brucellosis တိရစ္ဆာန်-လူ ကူးစက်ရောဂါ၊ Rickettsial infections (ရစ်က်ဆီရယ်-အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါ၊ Q fever (ကျူ) အဖျား၊ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ၊ Inclusion conjunctivitis မျက်စိနာ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါတွေအတွက် သုံးတယ်။ ငှက်ဖျား ကာကွယ်ဘို့ပါ သုံးနိုင်တယ်။ ငှက်ဖျားဒေသမသွားခင် ၂ ရက်ကြိုသောက်ပါ။ ပြန်လာရင် ၄ ပါတ်အထိ ဆက် သောက်ပါ။ အားလုံးပေါင်း ၄ လထက်တော့ မပိုစေနဲ့။
Acne ဝက်ခြံ Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁-၂-၃ ပတ်။
သာမန် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ = ပျို့-အန်၊ ဗိုက်အောင့်၊ အရေပြားယား၊ မွေးလမ်းကြောင်းယား၊ မွေးလမ်းကြောင်း အဖြူဆင်း။
ဆိုးဝါးတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ (အဖြစ်နည်းပါတယ်) = ခေါင်းအကြီးအကျယ်ကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူး၊ မျက်စိ ကြည့်မကောင်း၊ ကိုယ်ပူ၊ ချမ်း၊ ကိုက်ခဲ၊ ဆုပ်ကွေးလိုခံစား၊ ဆီးနည်း၊ ဝမ်းပျက်၊ ဆီးအရောင်ရင့်၊ ဗိုက်နာ၊ ပျို့-အန်၊ နှလုံးခုန်မြန်၊ အစားပျက်၊ အသားဝါ၊ လည်ချောင်းနာ။
FDA ကနေ Pregnancy category D သတ်မှတ်ထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကို မပေးပါ။ အထဲက ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ သွားတွေ အရောင်မလှ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေရဲ့ သတ္တိကိုလဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ တခြာနည်း (Condom, Diaphragm, Spermicide) တခုခုသုံးပါ။
Demeclocycline, Minocycline, Tetracycline ဆေးတွေနဲ့တူလို့ တမျိုးကို မတည့်ရင် သူ့ကိုလဲ မတည့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျောက်ကပ် ရောဂါရှိနေရင် သတိထားရမယ်။ အသက် ၈ နှစ်အောက်ကလေး မပေးတာ ကောင်းတယ်။ Antacids, Anticoagulants, Carbamazepine, Penicillin, Phenobarbital, Phenytoin, Vitamins, Calcium, Iron, Magnesium ဆေးတွေနဲ့ အချိ်န်ခြာပြီး သောက်တာ ကောင်းတယ်။ ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းရောဂါရှိရင် သတိနဲ့ပေးရမယ်။ နေရောင်ကို ရှောင်နေတာ ကောင်းတယ်။
ပဌမမေးခွန်းမှာ ဖြစ်တဲ့သူ အသက် မသိပါ။ သက်သာတဲ့ရှင်လို့မရေးသင့်၊ သက်သာတယ်ရှင်လို့သာရေးသင့်တယ်။
- Floozy မိန်းမကောင်း၊
- Mistress အမျိုးသမီးကြီး၊
- Prostitute ငွေရှာတဲ့မိန်းမ၊
I’m so worried! လူနာတွေရော လူမာတွေကိုပါ စိုးရိမ်မိ...
Colors of the Rivers မြစ်တို့၏ အရောင်များ
Generosity and Grammar သဒ္ဓါတရားနဲ့ သဒ္ဒါအမှား
Uniformly enforced တပြေးညီ
Persistence ခေါင်းလည်းမာ နေတတ်ပါစေ
MSG Criticisms Should Be Taken With A Grain Of Sal...
Our Culture ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှု
One in 10 children has Aids defence
Medical investigation စမ်းသပ်ခြင်း
Small Rain မိုးနည်းနည်းရွာတယ်
Reading room at home အိမ်ကစာဖတ်ခန်း
Formula Feedings နို့မှုံ့တိုက်နည်း
Betnovate (ဘက်နိုဗိတ်) လိမ်းဆေးများ
Health Profile of our country မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာ...
Tongue protrudes လျှာထွက်ရခြင်း
You are Specialists အထူးကုများ
Presidential Debate (1) စကားစစ်ထိုးပွဲ (၁)
Presidential Debate စကားစစ်ထိုးပွဲ
Merit Culture ကောင်းတာပြုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု
Water requirements ရေဘယ်လောက်သောက်ရမလဲ
Cut it off! ဖျက် နဲ့ ဖြတ်
Soy milk ပဲနို့
Puberty မိန်းကလေး အရွယ်ရောက်ပြီ
Precocious puberty အပျိုဖြစ်စောခြင်း
The Ocean ဒို့ပင်လယ် ကျယ်ပါဘိ
Doctors make mistakes ဆရာဝန်များ၏ အမှားများ
You Betcha! လောင်းကစားသမား စည်းရုံးရေး (သို့) ကုလာ...
Sorry for the inconvenience သက်ပြင်းချရ တောင်းပန်ရ...
Medicine for Pneumonias and Respiratory Tract Dise...
ဒေါ်စု ကုလမှာ ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ
Mark Zuckerberg and his wife want to tackle all di...
Worms သန်ချဆေး (သို့) ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မေးခွန်...
Mission impossible မစ်ရှင်
Proof reader ဒေါ်စု ကုလမှာ ဘာတွေပြောခဲ့သလဲ
Lion statue ခြင်္သေ့ရုပ်
Book printing စာပုံနှိပ်ခြင်း
French kiss ပြင်သစ်အနမ်း နဲ့ ကျန်းမာရေး
FB question by an American student
Again I am here to talk at Marian University
In my bag ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ
Talk at Marian University
National ID အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်
Driving license ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
Pronouns ကျွန်တော့်သားသမီးတွေ နေကောင်းကြပါတယ်
Yes we can! ဘာလို့ မရရမှာလဲ
International Day of Peace ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတ
One Grade One Year
Tin Moe ဆရာတင်မိုး မှတ်ချက်
Soft drinks အချိုရည်
Book reading ဆရာပါရဂူကို အမှတ်ရခြင်း
A J Cronin စာအုပ်ကောင်း၏ ဘာသာပြန်ပြောင်း၏
Masala Spelling မယ်ဆလာ သတ်ပုံ
Fish-paste doctor နိုင်ငံခြားပြန် ငပိဆရာဝန်
Doctor from abroad နိုင်ငံခြားက ဆရာဝန်
Saffron uprising 2007
O Negative Blood Type (O-) အို-အနုတ်သွေးနဲ့ ကလေး
Hepatitis A အသည်းရောင် အသားဝါ (အေ)
First6months ပဌမခြောက်လ
Ending is never easy တည်ထောင်ရထက် ဖျက်သိမ်းရတာက ပိ...
Ali Baba အလီဘာဘာ
အမေရိကားရောက်မြန်မာများ ပြန်ချင်လျှင် ပြန်လို့ရအော...
Nickname သူငယ်ချင်းလို့ ဆက်၍ခေါ်မည်
Daw Suu and Sanctions ဒေါ်စုနဲ့ ဆန်ရှင် (၂)
Two years နှစ်နှစ်ကြီး နှစ်နှစ်ငယ်
IMM friends (2) စကားများ၏ အစားစား၏
Seven and Year
Paper Money ပိုက်ဆံကပြောတဲ့ သတ်ပုံ
Dissatisfaction သတင်းနှင့် ရန်ဖြစ်ခြင်း
IMM Friends ဆေးကျောင်းမှာ မသင်ခဲ့ရတဲ့ ဝေဒနာ